Marnaba ma gelin karaa wax badan xoogga saaraan ku taageerto kor u files shakhsi aawadood oo ah ammaankooda. Haddii aad qabto Nexus 5 iyo dukaan xog badan oo muhiim ah oo qiimo leh waxaa ku, waxaa dhici karta inaad rabto inaad samayso shaqo gurmad. Marka aad si qalad ah u tirtirto xog muhiim ah, qaab aad Nexus 5, aad u hesho Nexus 5 xado, ama wax kasta oo kale ee aan keeni khasaaro xogta, waxaad si fudud u heli karaan xogta dib la file gurmad ah.
Markaas, sida aad gurmad Google Nexus 5 kasta oo dheeraad ah u isticmaali kartaa? In this article, waxaan saddex hab fudud idin tusin inuu kaa caawiyo inaad gurmad aad Google Nexus 5 ilaa kombiyuutarka, phone kale ama account Google. Akhri oo u dooran hab lagu qabto isku day ah.
Habka 1: kaabta Nexus 5 ilaa kombiyuutarka
Habka 2: kaabta Nexus 5 ilaa phone kale / kiniin ah
Habka 3: kaabta Nexus 5 ilaa account Google
Marka aad rabto in aad music gurmad, videos iyo sawiro ku Nexus Google 5 ilaa computer ka oo kaliya, waxba cable USB ah, laakiin aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, in files kale gurmad, sida xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah, waxaad u baahan tahay caawimo ka ah qalab dhinac saddexaad weydii. The Wondershare MobileGo (user Windows) waa waxa aad u baahan tahay in aad ha barnaamijyadooda gurmad, jadwalka taariikhda, abuse wac, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, music, sawiro, info playlist iyo videos ka Nexus 5 ilaa kombiyuutarka.
Hoos waxaa ku qoran tilmaan tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo raad raac Google Nexus 5 ilaa kombiyuutarka. Waa maxay sababta aan kala soo bixi version maxkamada ee xorta ah ee Mobile Wondershare u sii Android? Waxay kuu ogolaanaysaa inaad la kulanto dhammaan muuqaalada muddo 15 maalmood oo lacag la'aan ah.
Tallaabada 1. Run barnaamijka iyo xirmaan Nexus 5 ilaa kombiyuutarka
Orod MobileGo Wondershare ku on your computer Windows. Connect aad Nexus 5 ilaa kombiyuutarka via cable USB ama WiFi. Si aad u samayso xiriir WiFi, waxaa idinku waajib ah si loo hubiyo in app MobileGo ayaa lagu rakibay on your Nexus 5. Haddii aan, ku xidh . Marka la xidhiidha ay tahay guul, aad Nexus 5 kula files ay la soo bandhigi doonaa furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Google Nexus 5 gurmad
In uu furmo suuqa hoose, guji kaabta One-Click . Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala gurmad ah, taas oo xogta oo dhan in la taageeray kartaa waxay ku taxan yihiin. Uncheck xogta aad uma baahna in ay gurmad iyo guji Back Up . Marka habka gurmad waa guul, riix OK in la xiro suuqa kala gurmad ama guji Open Folder si loo hubiyo file gurmad ah. Qaar ka mid ah maalinta, haddii aad rabto in la soo celiyo aad Nexus 5 ka dib markii khasaare xogta weyn, aad si fudud u riixi kartaa Super Qalabka > Soo Celinta . Dooro file gurmad iyo soo celinta aad Nexus 5.
Iyadoo MobileGo Wondershare ah, aad tahay qof ay awoodaan in ay gurmad files xulay aad. In galeeysid bidix, waxaad ka arki kartaa dhammaan faylasha waxaa loo kala saaraa. Guji qaybta in aad rabto in aad gurmad ah, sida Xiriirada . Suuqa ayaa u dhiganta u muuqataa ee guddiga midig. Sax faylasha aad la doonayo oo iyaga gurmad in kombiyuutarka.
Haddii aad rabto in gurmad qaar ka mid ah TXT, PDF, Excel, Word dukumentiyada kale iyo, waxaad eegi kartaa File. Dhammaan files iyo fayl badbaadiyey kaadhka aad SD iyo kaadhka xusuusta phone waa xaq waxaa.
Maxaa dhacaya haddii aad leedahay telefoonka kale oo doonaya in ay gurmad aad Nexus 5 leh? Way fududahay aad. The Wondereshare MobileTrans (Windows) waa barnaamij ka mid ah click u Android, macruufka, WinPhone iyo Symbian dadka isticmaala si ay u gudbiyaan xiriirada, music, sawiro, fariimaha qoraalka ah oo dheeraad ah oo u dhaxeeya ku haboon iyo si ammaan ah ah. Qaybta hoose ku sheegayaa sida loo raad raac Nexus 5 ilaa aalad Android aad, qalab iDevice, WinPhone iyo Nokia (Symbian).
Tallaabada 1. Isku aad Nexus 5 iyo telefoonka kale in kombiyuutarka
Si aad u bilaabaan la, aan bilowno Wondereshare ka MobileTrans kombiyuutarka. Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan labadaba Nexus 5 oo kale Android ah, macruufka ama qalab Symbian in kombiyuutarka. Labada qalab si dhakhso ah loo ogaado, markaas uu muujiyay in uu furmo suuqa hoose. Markaas files in loo gudbin karaa inta u dhaxaysa labada telefoonada yihiin saxday.
Weli yar qasan oo ku saabsan waxa loo gudbin karaa? Fiiri miiska soo socda.
Transfer Xiriirada Music Photos SMS Apps Videos Log Call Calendar
Galaxy 5 ilaa aalad Android
Galaxy 5 ilaa iPhone ah
Galaxy 5 ilaa a phone Nokia Symbian
Galaxy 5 ilaa WinPhone ah
Wondershare MobileTrans Ayaa sidoo kale aad u saamaxaaya in ay music gurmad, sawiro, videos iyo xiriirada ka Galaxy 5 lagu taabto iPod ama iPad macruufka orodka 9/8/5/6/7.
Tallaabada 2. kaabta Nexus 5 u qalab kale oo Android / macruufka / Symbian
Hubi in files saxday waa kuwa aad ku socoto in gurmad. Markaas, riix Start Transfer . Kala iibsiga file wuxuu ku bilaabmaa. Is ogow in aan barkinta qalab sidoo kale inta ay socoto kala iibsiga oo dhan.
Haddii aad leedahay xisaab Google iyo door bidaan in xogta gurmad aad Nexus 5 in ay, halkan joojiyo. On aad Nexus 5, guji Settings > kaabta & dib . Markaas, saxiixo in aad xisaabta Google iyo sax Back up xogta aan. Markaas, aad awoodo gurmad WiFi-password, xogta app, bookmark iyo goobaha kale ee daruurtii.
> Resource > Android > 3 Hababka in kaabta Google Nexus 5